देखि भ्रमण फिलिपिन्स - ब्राजिल भिडियो च्याट - Bate-Papo!
प्रेम मजाक गर्न र
अर्को ऐन (सेवा) को जो एक मानिस, निष्कपटता को आफ्नो प्रेम लागि, एक महिला मदत गर्न सक्छ, आफ्नो परिवार संग काम मा घर र खेत माको दिन मा फिलिपिन्समा, यी नै कार्यहरू गर्दै अब सामान्य, तर अधिक आधुनिक । एक मानिस अझै पनि प्रयोग गर्न समय खर्च"विजेता एक केटी"संग मीठो सन्देश, सानो उपहार र सिद्ध कार्यहरू, लागि जो उहाँले सँगसँगै उनको जताततै छ र जताततै । फिलिपिनो मानिसहरू छन्, जसले प्रयोग गर्न महिला (कहिलेकाहीं पनि भने, इशारा छैन) रूपमा प्रमाण को बल को आफ्नो. पेरिस रूपमा चिनिएको छ यो शहर, प्रेम र इटालियन को भाषा हो प्रेम । सायद कम राम्रो तरिकाले ज्ञात छ कि फिलिपिन्समा एक साँचो रोमान्टिक गन्तव्य हो । तिनीहरूले मात्र मीठो प्राण, मायालु, उदार, साँच्चै वफादार हुँदा तिनीहरूले विचार तिनीहरूले पाएका छन्"भनेर"- तर पनि धेरै प्रकारको मीठो. जब तपाईं पूरा एक फिलिपिनो, तपाईं आशा गर्न हरेक बिहान उठ संग राम्रो सुबह समाचार र ल्याउन एक मिठाई को प्रस्ताव राम्रो रात ओछ्यानमा । आशा सानो इशाराहरू जस्तै, एक अप्रत्याशित यात्रा, वा ल्याउने (नाश्ता). र यी इशाराहरू गर्न सकिन्छ भन्दा धेरै बढी सिढी मा विशेष अवसरमा यस्ता जन्मदिन, वार्षिकोत्सव, प्रणय दिवस । बस सम्झना, कुनै कुरा कसरी धेरै तिनीहरूले तिनीहरूलाई प्रेम, तिनीहरूले पनि प्रेम गर्न तिनीहरूलाई स्वीकार । यो आउँदा फिलिपिनो सभा, कुनै पनि अधिक बारेमा सानो गल्ती बाहिर जान को सीमा । हुन गर्छन, धेरै गैर. सम्भव छैन गुमाउन आफ्नो धैर्य र प्रतिक्रिया संग रिस, जो सामान्यतया एक प्रतिक्रिया के तपाईं गरेको छु, म चेतावनी हुन तिनीहरूलाई धेरै कम, उत्तरदायी, र उत्साहित छ । सामना गर्न तपाईं सीधा वा मा आफ्नो उपस्थिति छ । हुनत यो गर्न सक्छन् दुखी जो एक व्यक्ति थाहा छैन, यो ह्यान्डल गर्न कसरी, यो सामान्यतया कथित रूपमा बदमासी समयमा एक परिवार बैठक (र यसैले छैन, बन्द राखे सम्म एक धेरै गम्भीर चरण को सम्बन्ध). मा फिलिपिनो संस्कृति, जहाँ परिवार सामान्यतया नजिक र पारिवारिक सम्बन्ध हो, अत्यधिक कदर गर्न, एक व्यक्ति छ शुरू गर्न परिवार साझेदारी, तर यो प्राकृतिक छ । तर त्यहाँ केही डराएका हुन । फिलिपिनो परिवार छन्, धेरै न्यानो सत्कार र उदार । यस को भाग हो फिलिपिन्स र भाग रहनसहन बनाउन अतिथि जस्तै महसुस बस एक भन्दा बढी परिवार छ । हो, धेरै चाँडै, तिनीहरूले जस्तै तपाईं महसुस.
संग बैठक पछि फिलिपिनो परिवार, तिनीहरूले तयार गर्न आमन्त्रित गर्न छ कुनै पनि पछि परिवार पुनर्मिलन । एक पटक तपाईं को एक सदस्य बन्न, एक फिलिपिनो परिवार, तपाईं चाँडै पत्ता पूर्ण शब्द को अर्थ"परिवार"मा फिलिपिन्समा.
परिवार बस को हिमशैल को टिप । तयार प्राप्त गर्न पूरा दोस्रो र तेस्रो चचेरे देखि विभिन्न प्रान्त, सम्बन्ध जो परिवार संग खोज मा पायाइयो सकिँदैन समेत रगत । तिनीहरूको संख्या सयौं पुग्नेछ, र छ भने तपाईं पहिले देखि नै भएको धेरै रात्रिभोज तिनीहरूलाई वा तिनीहरूलाई भेट एक पटक मात्र भने, तपाईं भाग मानिन्छ परिवार, त्यसपछि तिनीहरूले व्यवहार हुनेछ रूपमा तपाईं को एक सदस्य को परिवार । यो सामान्य छ जब विस्तारित परिवार छ भर बाहिर फैलाउन देशको प्रान्त । यो बाटो, तपाईं पक्का हुन सक्छौं कि तपाईं, हुनेछ छ जो कसैले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका हुनेछ वा तपाईं मा हाँस्नुहुन्थ्यो तपाईं पाउन भने आफैलाई मा परिवार को एक लिली सदस्य । डेटिङ सेवा, तपाईं पाउनुहुनेछ मात्र फिलिपिनो परिवार, तर पनि फिलिपिनो मित्र । तापनि साधारण छन् धेरै स्वागत र स्वागत, तिनीहरूले एकीकृत हुनेछ तपाईं मा फिलिपिनो हामी ज्ञात छ बाल्यकाल देखि. तर अर्को महत्वपूर्ण फिलिपिनो, तपाईं मूलतः एक प्राप्त पास को सर्कल । र चाल बनाउने फिलिपिनो साथी छ खुला हुन, रमाइलो, सजिलो, र एक ठूलो हास्य को अर्थमा. तपाईंलाई थाहा छ, कसरी सफल र तपाईंको मित्र तपाईं प्रेम. तापनि फिलिपिन्समा पनि माथि बनाउन को एक महत्वपूर्ण भाग, यो अंग्रेजी भाषा बोल्ने जाति, अझै पनि त्यहाँ छन् भनेर केही कुराहरू गाह्रो हुन सक्छ लागि गैर-देशी वक्ता बुझ्न । पहिलो, त्यहाँ छन्, धेरै देश मा जहाँ पनि नेपाली भाषा बोल्ने विदेशीहरू गर्न सक्छन् कोर्नु आफ्नो टाउको मा भ्रम । या त त्यहाँ छन्, मात्र केही कुराहरू तागालोग (उदाहरणका लागि, केही शब्दहरू छैनन् अनुवाद मा सिधै अंग्रेजी, वा छन् मा तागालोग अर्थमा बनाउन छैन भनेर अंग्रेजी मा). एक फिलिपिनो आफ्नो पक्ष मा, यो छैन केवल एक तत्काल अनुवादक, तर तपाईं छन् जो कसैले व्याख्या हुनेछ सबैभन्दा कठिन भाषा बाधा, यस्तो हास्य. देश मा, फिलिपिनो संस्कृति र परम्पराहरू छन्, एक रोमाञ्चक कुरा जान्न र अनुभव छ । फिलिपिन्समा एक रोचक र विविध देश । यो हुन्छन् विभिन्न प्रान्त, प्रत्येक यसको आफ्नै संस्कृति र प्रचलन, साथै एक लामो सूची स्थानीय भाषाहरू र आदिवासी जनजातिको. तपाईं जान भने एक तिथि मा एक फिलिपिनो प्राप्त गर्न यो सबै थाहा र आफूलाई डुबाउनु को देश, तपाईं पक्का हुन सक्छौं प्रयास गर्न नयाँ छिमेकी रेस्टुरेन्ट छ कि तिनीहरूलाई सबै उत्साहित, मा एक गाढा पर्खाल मा प्वाल देखिन्छ कि सेवा गर्न प्रामाणिक मोरक्कन भोजन । पनि राम्रो, त्यहाँ छन् धेरै जो वरिपरि आफ्नो बाटो थाहा भान्सा. कम से कम तिनीहरूले थाहा हुनेछ कसरी कुक गर्न औसत मा जान क्रम मा, एउटा मिति मा एक फिलिपिनो, यो धेरै संभावना छ कि तिनीहरूले हुनेछ हुक संग एक विशाल कराओके मित्र मा यो प्रक्रिया.
सबैभन्दा जो पूरा गर्न सक्छन् धुन (सायद किनभने तिनीहरूले राम्रो प्रशिक्षित मा प्रत्येक गीत बाल्यकाल देखि, तिनीहरूले मा परिवार जमघट).
तर पनि भने, आफ्नो आवाज छ रूपमा राम्रो छैन, छैन भन्न म तिमीलाई प्रेम कम, किनभने पनि सानो व्यक्तिहरूलाई छैनन् शर्म को माइक्रोफोन । त्यसैले पनि भने, टिप्पणीहरू छैनन् पुगेको छ, विश्वास एक फिलिपिनो रोकिराखेको एक कराओके माइक्रोफोन मा आफ्नो हात छ बनाउन पर्याप्त अनुभव को खेल धेरै मजा छ । छन्, मात्र ठूलो खाना र कराओके, तर पनि शानदार यात्रा साथीहरू. छन्, विशेष गरी यो खाना आउछ जब.
मात्रा, केही कुराहरू छन् कि आघात यो सेवा गर्दा एक प्लेट मा । त्यसैले तपाईं शायद हुनेछ तयार गर्न प्रयास पनि सबैभन्दा विचित्र व्यञ्जनहरु एक विदेशी देश मा.
तिनीहरू पनि विभिन्न परिस्थितिमा मिल्न सक्ने. तिनीहरूले रुचि छैन, एक जायका बनाउन र प्रयास पैदा गर्न सकेसम्म सानो समस्या सबैलाई, त्यसैले तिनीहरू धेरै सजिलो कुराकानी गर्न । अर्को कुरा प्रेम को राम्रो व्यापार छ । त्यसैले तपाईं छन् जहाँ एक देश मा खर्च एक साधारण सम्झौता चिप, तपाईं गर्न सक्छन् खरीद मूल्य कम र संभवतः आनन्द सारा प्रक्रिया । र अन्तमा, प्रेम गर्न तिनीहरूलाई तस्वीर र तिनीहरूलाई मा.
त्यसैले तपाईं प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने दूर आफ्नो यात्रा संग एक फोटो तपाईं योग्य, तपाईं हुनुपर्छ यात्रा संग मलाई अब । हामी र हाम्रो साझेदार गर्न कुकीहरू प्रयोग राम्रो आफ्नो आवश्यकता बुझ्न, उत्पादकत्व सुधार, र छुटकारा व्यक्तिगत सामग्री र सेवाहरू । विज्ञापन सन्देश.
पूरा फिलिपिन्समा. सभाहरूमा तपाईं को लागि हो. वास्तविक फोटो
डेटिङ-उल्लनबटर-दर्ता बिना हतियार - मुक्त डेटिङ साइट छ ।
भिडियो च्याट डेटिङ दर्ता विकल्प अनलाइन भिडियो डेटिङ साइट निःशुल्क अनलाइन पूरा गर्न तपाईं भिडियो डेटिङ संसारमा भिडियो अनलाइन डेटिङ कुनै दर्ता भिडियो एकल महिला चाहने पूरा गर्न तपाईं भिडियो परिचय